< img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2735146430138249&ev=PageView&noscript=1" />
Iju mmiri LED
Igwe ọkụ ọkụ nke LED
oriọna echebe anya
Dị ka a na-ekwu, oge ochie anaghị anwụ anwụ.Narị afọ ọ bụla nwere akara ngosi ya na-ewu ewu.N'oge a, oriọna nchebe anya na-ekpo ọkụ nke ukwuu n'ọhịa nke ụlọ ọrụ ọkụ.
Usoro ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọkụ na 2022
Mmetụta dị na ọrịa na-efe efe, ngbanwe nke ihe ịchọ mma ndị ahịa, mgbanwe site na ụzọ ịzụrụ ihe, na ịrị elu nke oriọna na-enweghị isi na-emetụta mmepe nke ụlọ ọrụ ọkụ.Na 2022, kedu ka ọ ga-esi etolite?
Kedu ụdị ndụ smart home ga-ewetara anyị?Kedu ụdị ọkụ smart ka anyị kwesịrị ịkwado?
Ọdịiche dị n'etiti T5 na T8 LED Tubes
Ị maara ihe dị iche n'etiti LED T5 tube na T8 tube?Ugbu a, ka anyị mụta banyere ya!
Ọnụ ahịa ibu ụgbọ mmiri ebilila 370%, ọ ga-agbada?
site admin na 21-07-26
N'oge na-adịbeghị anya, anyị anụwo ọtụtụ mkpesa sitere n'aka ndị ahịa: Ugbu a ibu ụgbọ mmiri dị elu!Dị kaFreightos Baltic Index, site na afọ gara aga ọnụ ahịa ibu ebugola ihe dịka 370%.Ọ ga-agbada n'ọnwa na-abịa?Azịza ya agaghị ekwe omume.Dabere na ọdụ ụgbọ mmiri ugbu a na ọnọdụ ahịa, mmụba ọnụahịa a ga-agbatị ruo 2022.
Ụkọ Chip zuru ụwa ọnụ na-akụ ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ LED
site admin na 21-05-10
Ụkọ mgbawa zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu emebiwo ụlọ ọrụ teknụzụ ụgbọ ala na ndị ahịa ruo ọnwa ole na ole, ọkụ ọkụ na-akụkwa ọkụ.Mana mmetụta dị egwu nke nsogbu ahụ, nke nwere ike ịdịgide ruo 2022.
Kedu ihe kpatara usoro nkesa ọkụ ọkụ n'okporo ámá na-abụghị otu?
site admin na 21-04-27
Ọtụtụ mgbe, anyị na-achọ ikesa ọkụ ọkụ nke oriọna ahụ ka ọ bụrụ otu, n'ihi na ọ nwere ike iweta ọkụ dị mma ma chebe anya anyị.Mana ị hụtụla usoro nkesa ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ?Ọ bụghị otu, gịnị kpatara?Nke a bụ isiokwu anyị taa.
Mkpa ámá egwuregwu imewe ọkụ
site admin na 21-04-15
Ma a na-atụle ya site na egwuregwu n'onwe ya ma ọ bụ ekele ndị na-ege ntị, ámá egwuregwu chọrọ usoro nhazi nke sayensị na ezi uche dị na ya.Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ?
Kedu ka esi etinye ọkụ n'okporo ámá LED?
Isiokwu a na-elekwasị anya na-ekere òkè isi nke LED n'okporo ámá ọkụ ọmụma na-eduzi onye ọ bụla otú wụnye LED n'okporo ámá ọkụ izute chọrọ.To nweta ụzọ ọkụ imewe, anyị kwesịrị comprehensively tụlee ọrụ, aesthetics na ego, wdg ihe.Mgbe ahụ, ntinye oriọna okporo ụzọ kwesịrị ịghọta isi ihe ndị a:
Ọmụma ihe gbasara akwụkwọ
site admin na 21-01-20
Ị maara ihe dị iche n'etiti draịvụ ike na-enye ike dịpụrụ adịpụ na draịva na-anọghị iche?
Ị maara ihe ndị ọzọ gbasara usoro ọnụahịa nke akụrụngwa aluminom?
site admin na 21-01-10
Aluminom nwere ọtụtụ uru dị ka isi ihe maka ọkụ ọkụ LED, ihe ka ọtụtụ n'ime ọkụ Liper anyị bụ nke aluminom, mana ọnụahịa ngwaahịa aluminom na-adịbeghị anya tụrụ anyị n'anya.
Nkọwapụta ihe nrịbama nke ọkụ ọkụ
site admin na 20-12-03
Ị na-enwe mgbagwoju anya n'etiti ọkụ na-egbuke egbuke na lumens?Na-esote, ka anyị leba anya na nkọwapụta parampat oriọna LED.
Ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị?
Biko hapụ anyị ozi anyị ga-alaghachikwute gị ASAP.
D Series ọkụ okporo ụzọ anwụ - Smart ...
© Nwebiisinka 20202021: Ikike niile echekwabara.Nkwado ndị teknuzu:
Koodu QR Wechat